शीर्ष चीन सोर्सिour एजेन्ट - निing्गो विक्रेता संघ इम्प एंड एक्स्प कं, लिमिटेड
सर्वश्रेष्ठ चीन सोर्सिंग एजेन्ट
सेल्स युनियन हो यिउ चीनको सोर्सिङ एजेन्ट कम्पनी हो जसको स्थापना 1997 मा 1200 भन्दा बढी कर्मचारीहरू छन्। हामीले शान्ताउ, निङ्बो, ग्वाङ्झाउमा कार्यालय पनि बनायौं। हामीसँग समृद्ध उत्पादन स्रोत र अनुभव छ, त्यसैले हामी विभिन्न प्रकारका ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्छौं।
हामी तपाईंले चीनबाट आयात गर्ने सबै प्रक्रियाहरू व्यवस्थापन गर्न सक्छौं, तपाईंलाई विश्वसनीय चीन आपूर्तिकर्ताहरू फेला पार्न, उत्पादनलाई फलोअप गर्न, गुणस्तर सुनिश्चित गर्न र तपाईंको देशमा ढुवानी गर्न मद्दत गर्न सक्छौं। हामीसँग एक पेशेवर डिजाइन टोली पनि छ जसले अनुकूलित आवश्यकताहरू र उत्पादन फोटोग्राफी राम्रोसँग पूरा गर्न सक्छ। चीनमा तपाईंको भरपर्दो साझेदार।
चीन एजेन्ट सेवा पाउनुहोस्
२०००० m² गोदाम, नि: शुल्क गोदाम १ महिना।
10,000+ सहयोग कारखाना, सम्पूर्ण चीन भर मा सोर्सिंग सेवा।
हाम्रो अनलाईन शोरूम भन्दा बढी उत्पादनहरू र १ 18,००० आपूर्तिकर्ताहरू।
500+ कर्मचारी जो धाराप्रवाह अंग्रेजी र स्पेनिश बोल्छन्।
चीनबाट सामान ढुवानी गर्नुहोस् र उत्तम शिपिंग दर पाउनुहोस्।
निर्यात व्यापार मा २ years बर्षको अनुभव।
१००+ कन्टेनरहरू शिपिंग प्रति वर्ष।
1100+ मिलियन डलर वार्षिक कारोबार।
१२+ विभिन्न भाषाहरू अनुवादकहरू।
सामान मार्केटिंग कम्पनी सुपरमार्केट,
एक डलर / यूरो स्टोर, खुद्रा विक्रेता र ब्रांड, आदि।
हाम्रो दीर्घकालीन सहकारी ग्राहकहरु
हामी एलआईडीएल, वाल मार्ट, क्यारफोर, पाउन्डल्याण्ड सीमित, टेडी जीएमबीएच र को.के.जी., डलर सामान्य चेन स्टोर, फोर सीजन डिपार्टमेन्ट स्टोर, डलर ट्री चेन स्टोर, पिकन पे, आदि आपूर्तिकर्ता हुन पाएकोमा सम्मानित छौं। १२० भन्दा बढी देशहरूबाट १500०० भन्दा बढी ग्राहकहरूसँग दीर्घकालीन सहकारी सम्बन्ध स्थापना गरियो।
हामीसँग त्रिनिडाड र टोबियागोमा बच्चा आइटमका लागि shops दुकानहरू छन्। हामी २०० 2005 बाट यिउू आइपुगेका थियौं। हामीले हाम्रो पूर्व एजेन्ट परिवर्तन गरेका छौँ र २०११ मा यिउ विक्रेता संघसँग सहयोग गरेका थियौं। - जेसी द्वारा
हामी एक आयात कम्पनी हौं मुख्यतया बहरिनमा प्रमोशनल उपहार गर्दछौं। हामी विक्रेता यूनियन कम्पनीलाई २०० from बाट सुरू गर्न सहयोग गर्दछौं। हाम्रो भोल्युम ठूलो छैन। हामी हरेक पटक हावामा चढ्छौं। - लुका
तपाईंको सफल व्यवसाय सुरु गर्नुहोस्
हाम्रो नयाँ कार्यालय
हामी कसरी तपाईंलाई स्रोत र चीनबाट आयात गर्न मद्दत गर्दछौं?
हामी तपाईको आवश्यकताको लागि सबैभन्दा उपयुक्त आपूर्तिकर्ता र उत्पादन खोज्छौं, तपाईलाई उत्तम मूल्य प्रदान गर्दछौं। यदि तपाईंसँग चीनमा आपूर्तिकर्ता छ भने, हामी तपाईंलाई आपूर्तिकर्तासँग मूल्य वार्तालाप गर्न मद्दत गर्न सक्छौं।
हामी कुनै पनि अनुकूलित सेवाहरू प्रदान गर्न सक्छौं, जस्तै OEM, ODM, प्याकेजिङ्ग डिजाइन, लोगो प्रिन्टिङ, कारखाना अडिट, नमूना सङ्कलन, इत्यादि। थप आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ बढाउनुहोस्।
हामी ढुवानी गर्नु भन्दा पहिले उत्पादको गुणवत्ता जाँच गर्नेछौं र फोटोका लागि भिडियो वा भिडियो लिनेछौं। यदि त्यहाँ समस्या छ भने हामी आपूर्तिकर्तालाई सूचित गर्नेछौं र समाधानको लागि कुराकानी गर्नेछौं।
कार्गो समेकन र रसद
विभिन्न आपूर्तिकर्ताहरूबाट उत्पादनहरू समेकित गर्नुहोस् र प्रबन्ध गर्नुहोस्, र तपाईंको लागि सब भन्दा उपयुक्त शिपिंग विधि छनौट गर्नुहोस्, तपाईंको आयात लागत अनुकूलन गर्नुहोस्। कम कन्टेनर लोड समर्थन गर्नुहोस्।
सीमा शुल्क निकासी सेवा
लचिलो भुक्तान सर्तहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्। बीमा सेवा पनि हाम्रो ग्राहकहरु को विशेष आवश्यकताहरु को लागी उपलब्ध छ। हाम्रा ग्राहकहरूको लागि आवश्यक आयात र निर्यात कागजातहरू तयार गर्नुहोस्। "एए ग्रेड कम्पनी; क्रेडिट निर्यात कम्पनी।
१. यदि हाम्रो पक्षमा जिम्मेवारी छ भने, हामी सबै लिन्छौं। २. यदि कारखाना पक्षमा जिम्मेवारी छ भने हामी कारखानासँगको वार्तालाप सुल्झाउनेछौं। Client. यदि ग्राहकले गरेको गल्ती, हामी ग्राहकलाई समाधान गर्न मद्दत गर्न सबै भन्दा राम्रो हुनेछ, अतिथि घाटा कम गर्न।
चीन ज्ञानबाट आयात गर्नुहोस्
चीनबाट आयात गर्नुहोस्: २०२१ पूरा गर्नुहोस्
चीनबाट कसरी आयात गर्ने? उत्पादनहरू र आपूर्तिकर्ताहरू कसरी छनौट गर्ने? गुणवत्ता जाँच गर्नुहोस् र शिपिंगको व्यवस्था गर्नुहोस्। सामान ट्र्याक गर्नुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस्।
सर्वश्रेष्ठ Yiwu बजार गाइड
Yiwu सानो कमोडिटी बजार के हो? यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो होलसेल बजारको रूपमा परिचित छ। तपाईलाई यहाँ चाहिने सबै कुरा भेट्टाउन सक्नुहुन्छ।
चीनियाँ सोर्सि Age एजेन्ट पूर्ण परिचय
सोर्सिंग एजेन्ट के हो? उनीहरूले तपाईका लागि के गर्न सक्छन्? कसलाई सोर्सिंग एजेन्ट चाहिन्छ? आपूर्तिकर्ता आफैलाई खोज्ने संग भिन्नता।